Ndenye Turn PCB Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Tupu PCBfuture.com enye ngwa ngwa turnkey PCB nzukọọrụ, ọtụtụ ndị ahịa na-agwa anyị mgbe niile na ha enweghị ike ịchọta onye mmekọ pcb a pụrụ ịdabere na ya maka ọrụ ngwa ngwa. Isi nsogbu ha na-eche ihu bụ:
a. Ọtụtụ ndị nrụpụta achọghị ịnye ọrụ mgbakọ igwe eletrọnịkị n'ihi na ọnụọgụ ego dị obere.
b. Na ụlọ ọrụ mgbakọ kọmputa enweghị ike ịtụ ihe niile achọrọ yana otu oke.
c. ihe Ha enweghị ike ịchọta ụlọ ọrụ mgbakọ pcb dị ọnụ ala ma e jiri ha tụnyere ha na-agbakọta ụdị PCB n'onwe ha
d. Onye nrụpụta PCBA arụghị ọrụ zuru oke, enweghị ike ijikọ ngwaahịa ha na ogo dị elu.
PCBfuture.com bụ ebumnuche kwụsị ndị a ma nye ogo dị elu yana ụgwọ dị ọnụ ala na-enweghị ọrụ ngwa ngwa.
PCBfuture nwere ahụmịhe bara ụba na -emepụta ụdị na PCBs dị obere ma nwee obere ma nwee ọgbakọ otu ọgbakọ nwere mmachi iji hụ na mgbakọ PCB gị ọsọ ọsọ. Anyị turnkey pcb nzukọ ụzọ ugboro bụ ndị kasị nso na ụlọ ọrụ, kasị anyị ụgbọ mmiri si na-ezukọ PCBs ahịa anyị na 3 ụbọchị.
1. PCB Prototyping kasị 24 awa
PCBfuture amalite azụmahịa site na PCB Manufacturing, anyị nwere ikike PCB siri ike iji zute oge ọrụ gị siri ike. N'ihi na Single n'akụkụ PCB / Ugboro abụọ n'akụkụ PCB na 4 oyi akwa PCB, anyị kasị nwere ike na-emepụta na 24 awa.
2. Ndenye uzo electronic components sourcing
PCBfuture ewulite mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị na - ahụ maka ngwa ụwa dịka Digi-Key, Arrow, Mouse, Avnet, na Chip one na wdg. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere ọgaranya yiri nkata maka ọtụtụ ndị na-eji ọtụtụ. Nke ahụ ga-ejide n'aka na anyị nwere ike ịkwadebe akụrụngwa eletriki dị elu yana ọnụahịa kacha mma yana oge idu.
3. Ngwa ngwa ntụgharị ọrụ nzukọ eletrọniki
Site na iji ọkaibe na elu SMT na Site * oghere igwe, anyị na-enwe ike ikpokọta iche iche nke PCBs na misted technology ngwa ngwa. Dị iche iche na ọtụtụ PCB Assembly emepụta, anyị nwere a raara onwe ya nye otu na SMT nzukọ edoghi maka ngwa uzo PCB nzukọ na prototype pcb nzukọ iwu.
Site na ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ihe ị chọrọ, PCB n'ichepụta, Components sourcing, SMT Assembly, DIP Assembly, Nnwale na Mbupu, kwụpụ na kwụpụ abụọ na na. Anyị nwere PMC Team nwere akọ na uche ịgbaso usoro ahụ ma hụ na anyị nwere ike ibupute ndị ahịa mbadamba ụlọ ahịa n'oge.
Dabere na ezigbo PCB n'ichepụta ma nwee ntụkwasị obi ọsọ ọsọ na-eme ka ị nweta nkwado, anyị nwere ike ịkwado na ị nwere ike ịnweta ọrụ mgbakọ eletrọniki afọ ojuju Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ maka ọrụ mgbakọ PCB. Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ na email@pcbfuture.com.